Vaovao - Shopify dia manova ny lalao eCommerce
Ilay mpanova lalao eo amin'ny tontolon'ny eCommerce, tsy iza fa ny sehatra Shopify.
Raha ny tena izy, ny fampiharana fiantsenana dia manangona ny traikefa fiantsenana finday iray manontolo, izany hoe ny fahitana, fandoavam-bola ary ny fandefasana amin'ny fampiharana tokana. Ireo mpanjifa dia miditra amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny mailaka, manaraka ireo marika samihafa avy amin'ny Shopify izay mipetraka amin'ny tsatok'aretina manokana momba ny vokatra naroso.
Izy ireo dia misafidy vokatra, miroso amin'ny fizahana ary manara-maso ny fandefasana. Eny tokoa, Shopify no fampiharana fivarotana finday tonga lafatra amin'izao fotoana izao, ary mitombo hatrany ny serivisy fampandrosoana ny tranokala Shopify.
Ilay mpanao trano fivarotana an-tserasera tsara indrindra
Shopify dia raisina ho toy ny sehatra eCommerce tsara indrindra amin'ny tsena ankehitriny.
Natao hanampiana ny olona amin'ny fananganana fivarotana an-tserasera azo zakaina sy feno fampiharana an-jatony sy fampiharana an-jatony, Shopify no sehatra fiantsenana be mpitady indrindra amin'izao fotoana izao. Mivarotra mivantana ny vokatra sy serivisy amin'ny Internet, manerana ny media sosialy sy tsena isan-karazany dia mora amin'ny Shopify.
Rehefa manomboka orinasa eCommerce ianao, misy zavatra maro tsy maintsy atahoranao, ao anatin'izany ny fahazoana mifanaraka tsara amin'ny tsenan'ny vokatra, ny vokatra, ny fitantanana ny lisitra, ary ny fanaovana tetika marketing.
Raha mbola tsy namolavola traikefa ianao, dia avelao ny manam-pahaizana, toa ny maso ivoho fampandrosoana Shopify hitantana ny lafiny fampandrosoana. Ny fandraisana mpiasa mpamorona dia mamela anao handany fotoana bebe kokoa amin'ny famolavolana lafiny hafa amin'ny orinasa.
Any ivelan'ny-boaty, ny sehatra no mpanorina tranokala eCommerce matanjaka indrindra. Izy io dia manana ny zavatra rehetra mety ilainao amin'ny fametrahana sy fitantanana ny orinasanao. Mihabetsaka ny fivarotana biriky sy rihitra mihetsika an-tserasera, raha manokatra magazay biriky sy mortara kosa ireo marika eCommerce malaza.
Amin'ny eCommerce androany, tsy misy zavatra mitovy amin'ny folo taona lasa. Izay rehetra manana orinasa amin'ny taonjato faha-21 dia mahalala momba ny Shopify. Na izany aza, na eo aza ny fielezany dia vitsy ny mahatakatra tsara ny fiverenan'ny fampiasam-bola arosony.
Ireo mpanorina ny lampihazo, noho ny filàna dia namolavola azy rehefa nahita fa ny safidy eCommerce ankehitriny dia tsy ampy amin'ny fivarotana. Niaraka tamin'i Shopify niaraka tamin'ny rafitra open source izy ireo. Nanomboka teo dia nitombo ny fahafahany mampiditra endri-javatra toy ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa, ny marketing ary ny maro hafa.
Miantsena, inona marina izany?
Amin'ny resadresaka eCommerce sy marketing amin'izao fotoana izao, Shopify dia iray amin'ireo vahaolana entina matetika.
Ny rehetra dia miondrika eo amin'ny marimaritra iraisana, saingy vitsy ihany no mahatakatra ny lojisialy an'io sehatra io. Raha tsorina, Shopify dia karazana vokatra ho an'ny varotra amin'ny varotra an-tserasera sy eCommerce.
Sehatra iray ahafahan'ireo manana teti-bola voafetra miditra amin'ny tontolo eCommerce, mamela ireo izay manana teti-bola lehibe kokoa hampitombo ny marika, ary angamba ny tena zava-dehibe, mamela ireo fivarotana ara-batana hanaparitaka ny elanelana misy eo amin'ny orinasan-tena sy ny fivarotana an-tserasera, noho ny Shopify's rafitra POS manan-tompo.
Ho an'ny orinasa maro samihafa, Shopify dia zavatra marobe, noho izany dia nanjary be dia be teo amin'ny marketing sy eCommerce an-tserasera mahomby tao anatin'ny folo taona lasa.
Ny vokatra sy serivisiny dia azo zahana amin'ny haben'ny orinasa. Ny varotra niomerika, ny fifampidinihana, ny varotra ara-batana, ny tapakila, ny lesona, ny hofan-trano, sy ny maro hafa koa — Shopify dia fivarotana tokana ho an'ny zavatra eCommerce rehetra.
Ho an'ireo izay maniry ho tonga mpandraharaha amin'ny Internet dia tena mahaliana izany.
Maninona no miorina amin'ny Shopify?
Ny filàna sy ny fangatahana fampandrosoana an'i Shopify dia nitombo hatrany. Ny sehatra dia efa ela no safidy tsara indrindra ho an'ny mpivarotra izay mandeha amin'ny fahatsorana sy endri-javatra manankarena amin'ny fitantanana ny fivarotana eCommerce. Shopify dia misy ireto tombony manaraka ireto:
Ny sehatra dia manana maodely maodely maodely sy matihanina hananganana magazay an-tserasera mahafinaritra. Na dia miaraka amina lohahevitra tsy misy fangarony aza izy io, ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamolavola sy mpamolavola lohahevitra Shopify dia hitondra traikefa ho an'ny mpampiasa manankarena kokoa amin'ny mpitsidika.
2. Fampiasana tsotra.
Tsy toy ny vahaolana eCommerce hafa, ny Shopify dia tsy mitabataba ary mora apetraka ary ho an'ny mpampiasa sy ny tsy developer. Manome rindrambaiko sy fampiantranoana handefasana tranonkala izany. Ankoatr'izay, ny interface admin dia friendly-intuitive sy intuitive.
3. Azo atokisana sy azo antoka.
Ny fananganana sy fitantanana fivarotana an-tserasera izay mikarakara ny mombamomba ny mpampiasa saro-pady, toy ny antsipiriany manokana sy ny mombamomba ny carte de crédit, amin'ny maha mpandraharaha anao dia irinao ho azo itokisana sy azo antoka. Shopify dia mandray ireo amin'ny alàlan'ny fikojakojana sy fanavaozana tsy tapaka.
4. Fampidirana fampiharana.
Ny sehatra fivarotana dia ahafahanao manamboatra mora foana ny magazanao an-tserasera, ary koa mampiditra rindranasa, ahafahanao manampy endrika sy fiasa manankarena kokoa hanamafisana azy.
Tombontsoa iray hafa ho an'ny Shopify ny hafainganam-pandehany haingana noho ny fitaovana sy rindrambaiko namboarina. Ny fotoana fampidinana dia misy fiatraikany lehibe eo amin'ny farany ambany, satria ny mpanjifa dia mazàna mandao tranonkala iray izay mihoatra ny efatra segondra aza ny entana. Noho izany, ilaina ny mitady vahaolana voatahiry haingana.
6. Fitaovana ara-barotra miavaka.
Shopify dia manolotra tombontsoa ara-barotra ihany koa mba hampitomboana orinasa. Ny kinova fototra dia manome fitaovam-pikarohana marobe marobe sy fiasa SEO. Ankoatr'izay, manolotra fiasa toa ny tapakila fihenam-bidy izy, statistikan'ny magazay, marketing amin'ny mailaka, karatra fanomezana ary maro hafa.
Maninona ny Sehatra toa ny Shopify no ho avin'ny eCommerce
Ny varotra eCommerce manerantany dia vinavinaina hahatratra $ 5 tapitrisa tapitrisa amin'ity taona ity na amin'ny manaraka. Ny tarehimarika dia maneho fitomboan'ny 265 isan-jato raha oharina amin'ny 2014. Ny fisondrotana dia azo lazaina fa lehibe amin'ny fahafahan'ny tsena vaovao manerantany.
Amin'ny taona ho avy, efa ho 20 isanjaton'ny varotra eCommerce no natokana ho an'ny mpanjifa any ivelany. Toy izany koa ny tobin'ny mpanjifa an-trano satria manitsakitsaka ny fetra ara-kolontsaina sy ny fizarazarana isam-paritra ny Internet. Ireo mpanjifa izao dia afaka mifandray amina marika vahiny tsy mbola nisy toy izany hatrizay, noho ny eCommerce.
Miroborobo ny orinasa, ary mila fotodrafitrasa matanjaka hanohanana ny fitomboana tsy manam-paharoa. Amin'izao fotoana izao, ny fampandrosoana Shopify sy Shopify dia alika goavambe mifaninana amin'ny tontolon'ny eCommerce, fa misy koa ny hafa. Na izany aza, ny mampiavaka azy ary ny tena mampiavaka azy amin'ny ambiny dia ny fahaizany mahay.
Ny traikefa eCommerce mifandraika dia miankina amin'ny fahombiazan'ny lafin-javatra maro. Na inona na inona no amidinao, na avy amin'ny fivarotanao ara-batana na any ambanin'ny taninao, dia mampitovy ny eCommerce. Tsy misy intsony ireo paosy lalina izay mitovy amin'ny orinasa mandeha ho azy ankehitriny.
Amin'izao andro izao, ny marika maresaka iray, ny paikady mahavariana, ary ny fanao amin'ny fangorahana mangoraka aza dia mety hitarika orinasa maro. Ny loka amin'ny sehatra toy ny Shopify, ny sakana fidirana amin'ny tontolon'ny eCommerce dia tsy ambany velively. Izay manana etika miasa mafy, hevitra tsara ary vintana kely dia mety hahomby eo amin'ny sehatry ny tsena.
Fahafahana lehibe izay mitondra ny fitomboan'ny Shopify amin'ny ho avy
Na dia miasa aza ny sehatra fiantsenana any amin'ny firenena 175 manerantany, dia mety hahagaga ny mpampiasa vola mahafantatra fa ny ankamaroan'ny varotra azo dia any Amerika Avaratra. Ny orinasa dia niasa mafy tamin'ny fanitarana ny fari-piainany iraisam-pirenena sy ny asany, ary koa ny fanomezana fitaovana voafantina ho an'ny tobin'ny mpivarotra manerantany.
Androany, Shopify dia misy amin'ny fiteny 20 samy hafa ary ny Shopify Payments dia nitatra tamin'ny firenena dimy ambin'ny folo. Tamin'ny faran'ny taona lasa, mpivarotra maro eto amin'izao tontolo izao no nandefa ny orinasany tao amin'ny Shopify.
Ny Networkify Fulfillment Network dia nolaniana tamin'ny taon-dasa fotsiny, fa ny famantarana rehetra dia milaza fa mamiratra ny ho avy ho an'ny tambajotra. Mpivarotra an-jatony maro no naneho ny faniriany ho ao anatin'ny programa fidirana. Shopify nanomboka tamin'izay dia naka fomba norefesina, tsy nanampy afa-tsy 'mpivarotra am-polony' fa mitazona ny fifantohana amin'ny kalitaon'ny fampisehoana mihoatra ny ambaratonga eo am-piandohana.
Ity taona ity dia ho 'fampiasam-bola mavesatra' ho an'ny Shopify, satria mihamaro ny mpandraharaha mihevitra ny hampiasa vola amin'ny vahaolana Shopify.
Ny areti-mandringana Coronavirus, na dia niato be aza ny orinasa maro ary nisy fiantraikany tamin'ny mpiasa an-tapitrisany eran'izao tontolo izao, ny olona dia nahita fotoana hanaovana bizina an-tserasera, satria ny fameperana sy ny fanaraha-maso ny sisintany dia ampiharina. Miaraka amin'ny filan'ny olona hijanona ao an-trano dia nitatra bebe kokoa ny fiantsenana an-tserasera.